Engineering Courses | king
Specialist Certificate In Interior & Exterior Design
Specialist Certificate In Decoration Technology & Design Concept
ရန်ကုန်မြို့၏ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွင်အောင်မြင်မှုရရှိနေသော company များစွာအနက်မှ King Construction Group Co., Ltd. မှဦးစီးဖွင့်လှစ်မည့် “Certificate in Civil Engineering” မျိုးဆက်သစ်အင်ဂျင်နီယာများအတွက်လုပ်ငန်းခွင်အကြိုအတွေ့အကြံဆိုင်ရာအထောက်အကူပြုသင်တန်းအားဝါရင့်အင်ဂျင်နီယာကြီးများမှစာတွေ့လက်တွေ့ဖြင့်သင်ကြားပေးရမည်ဖြစ်ရာအောက်ဖော်ပြပါ Engineer ဆိုင်ရာပညာရပ်များကိုသင်ကြားပေးသွားပါမည်ဖြစ်ပါသည်။
(၁) Basic Construction Surveying & Leveling
(၂) Working Drawing / Structure Drawing ဖတ်ရှုနည်းများ
(၃) Site Inspection
(၄) Quality Management System
(၅) Project Management
(၆) Safety Awareness
(၇) Maintenance of Construction Raw Materials
(၈) Basic instruction of construction machines
(၉) Basic YCDC Rules for all types of building
သင်တန်းကာလအတွင်းဘာသာရပ်တစ်ခုခြင်းဆီအလိုက်ထူးချွန်မှုများကို Credit ပေးသွားမည်ဖြစ်ရာသင်တန်းပြီးဆုံးပါကထုးချွန်ထက်မြက်သောသင်တန်းသူ/သားများအား King Construction Group Co., Ltd ၏ Engineer နေရာများတွင်ခန့်အပ်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
သင်တန်းကြေးမှာ 220000 ကျပ်ဖြစ်ပြီးပထမဆုံးလာရောက်အပ်နှံသောသင်တန်းသားသူ/သား 10 ဦးအား 20% Discount ပေးအပ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
ရန်ကုန်မြို့၏ ဆောက်လုပ်ရေး/Design လုပ်ငန်းတွင် အောင်မြင်မှုရရှိနေသော company များစွာအနက်မှ King Construction Group Co., Ltd. နှင့် AME Accredited Oxford Academy (UK) တို့ဦးစီးဖွင့်လှစ်မည့် မှ ဦးစီးဖွင့်လှစ်မည့် “Specialist Certificate in Interior and Exterior Design” “Design Concept and Design” လုပ်ငန်းတွင် Professional ဖြစ်လိုသူများအတွက် Singapore နိုင်ငံရှိ ၀ါရင့် Design ပညာရှင်/ အင်ဂျင်နီယာ ကြီးများမှ စာတွေ့လက်တွေ့သင်ကြားပေးမည် ဖြစ်ပြီး “AME Accredited Oxford Academy (UK)” မှချီးမြင့်သော အောက်ဖေါ်ပြပါ Design ဆိုင်ရာပညာရပ်များကို သင်ကြားပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
(၁)Interior and exterior design concept
(၅)3D max rendering
(၇)Design Details 2D Drawings Technology
သင်တန်းကာလမှာ ၂လ ဖြစ်ပြီး တန်းခွဲတစ်ခုတွင် လူ ဦးရေ ၂၀ သာ လက်ခံပေး သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ သင်တန်းအတွက် လိုအပ်သော သင်ထောက်ကူ ပစ္စည်းများနှင့် စာရွက်စာတန်းများအား သင်တန်းမှပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ သင်တန်းကာလအတွင်း ဘာသာရပ် တစ်ခုခြင်းဆီ အလိုက်ထူးချွန်မှုများကို Credit ပေးသွားမည် ဖြစ်ရာ သင်တန်းပြီး ဆုံးသွားပါက ထူးချွန်ထက်မြက် သောကျောင်းသူ/သားများအားKing Construction Group Co.,Ltd ၏ Design Department နေရာတွင်ခန့်အပ်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ တက်ရောက် လိုသူများအနေဖြင့် မကြာမှီဖွင့်လှစ်တော့မည့် တန်းခွဲသစ်များအတွက် စတင် စာရင်းပေးသွင်း နိုင်ပါပြီ။ “Engineer မဟုတ်သော Design လုပ်ငန်း စိတ်ဝင်စားသူများလည်း တက်ရောက်နိုင်ပါသည်။ သင်တန်းကြေးမှာ 180000 ကျပ်ဖြစ်ပြီး ပထမဆုံး လာရောက်အပ်နှံသော သင်တန်းသား/သူ ၇ဦးအား ၁၀%Discount ပေးအပ်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
Decoration and design lecture
Dip in Construction(UK)
XL Design liability IQ A&E (USA)
B.C.C ( Singapore)
Specialist Dip in Interior and landscape Design(Singapore)
အဆောက်အဦးဒီဇိုင်းအတွက် 2D ,3D ရေးဆွဲနည်းများ live inderior 3d Design ရေးဆွဲနည်း လူနေအဆောက်အဦးဒီဇိုင်းပြုလုပ်ရန် အတွက်လိုအပ်သော အခြေခံ စံနှုန်းများ layout Plan ရေးဆွဲနည်း ရေးဆွဲသောအဆောက်အဦး Model အား Animation ဖြင့် Illustration ပြုလုပ်နည်း Block Modeling, sketch Modeling, Photo Modeling ,ပြုလုပ်ခြင်း V -ray Rendering ပြုလုပ်ခြင်း တို့အပြင် Software အား Professional တစ်ယောက်ကဲ့သို့ ကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုတတ်စေရန် အမှန်တကယ် တတ်မြောက်သည်အထိ နိုင်ငံတကာ အတွေ့အကြုံရှိသော ဆရာများမှ တာဝန်ယူသင်ကြားပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။
သင်တန်းကာလမှာ ၁လ ကြာမြင့်မည် ဖြစ်ပါသည်။
သင်တန်းကြေးမှာ 90000 ကျပ်ဖြစ်ပြီး ပထမဆုံးလာရောက်အပ်နှံသော သင်တန်းသား/သူ ၅ဦး အား10 %Discount ပေးအပ်မည် ဖြစ်ပါသည်။
အင်ဂျင်နီယာမဟုတ်သော ဒီဇိုင်းဆွဲခြင်းလုပ်ငန်းကိုစိတ်ဝင်စားသူများလည်း တက်ရောက်နိုင်ပါသည်။
ရန်ကုန်မြို့၏ ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်း တွင်အောင်မြင်မှု ရရှိနေသော company များစွာအနက်မှ King Construction Group Co., ltd. နှင့် AME Accredited Oxford Academy (UK) တို့မှဦးစီးဖွင့်လှစ်မည့် ” Specialist Certificate in Building Inspection”
အင်ဂျင်နီယာများ / Construction လုပ်ငန်းတွင် Inspector/Quality Control Engineer ပြုလိုသူများ အတွက် လုပ်ငန်းခွင် အကြို အတွေ့အကြုံအထောက် အကူပြု သင်တန်းအား ဝါရင့်အင်ဂျင်နီယာ ကြီးများမှစာတွေ့လက်တွေ့ဖြင့် သင်ကြားပေးမည် ဖြစ်ပြီး “AME Accredited Oxford Academy (UK)” မှချီးမြင့်သောအောက်ဖေါ်ပြပါ Engineer ဆိုင်ရာပညာရပ်များကို သင်ကြားပေး သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
(၁)Construction Surveying & Leveling
(၂)Working Drawing/Stucture Drawing ဖက်ရှုနည်း/စစ်ဆေးနည်း
(၃)Project Estimate (QS) , Manual & Excel software
(၄)Formwork Inspection Technology
(၅)Concrete Inspection Technology
(၆)Steel structure site inspection technology
(၇)RC inspection technology , Rebar inspection in RCC building.
သင်တန်းကာလမှာ ၂လ ဖြစ်ပြီးတန်းခွဲ တစ်ခုတွင်လူ ဦးရေ ၂၅ သာလက်ခံပေး သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ သင်တန်းအတွက် လိုအပ်သော သင်ထောက်ကူ ပစ္စည်းများနှင့် စာရွက်စာတန်းများအား သင်တန်းမှပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ သင်တန်းကာလ အတွင်းဘာသာရပ် တစ်ခုခြင်းဆီအလိုက်ထူးချွန်မှု များကို Credit ပေးသွားမည်ဖြစ်ရာ သင်တန်းပြီးဆုံးသွားပါက ထူးချွန်ထက် မြတ်သောကျောင်းသူ/သားများအား King Construction Group Co.,Ltd ၏ Inspection Engineer နေရာတွင်ခန့်အပ်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ တက်ရောက်လိုသူများ အနေဖြင့် မကြာမှီဖွင့်လှစ်တော့မည့် တန်းခွဲသစ်များ အတွက် စတင်စာရင်းပေးသွင်း နိုင်ပါပြီ။ “Engineer မဟုတ်သော ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းစိတ်ဝင်စားသူများလည်းတက်ရောက်နိုင်ပါသည်။” သင်တန်းကြေးမှာ 180000 ကျပ်ဖြစ်ပြီး ပထမဆုံး လာရောက် အပ်နှံသော သင်တန်းသား/သူ ၇ဦးအား ၁၀%Discount ပေးအပ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
U Tin Maung Htwe ( Civil lecture )
Asian Chartered Professional Engineer ( ACPE- 00698/mm)
B.E (Civil) ( MES- Asean engineer – 01788 AFEO , Senior License Engineer LS -268 YCDC (PE) 0060 MBE. Civil Consultant
ရန်ကုန်မြို့၏ ဆောက်လုပ်ရေး/Decoration လုပ်ငန်းတွင် အောင်မြင်မှု ရရှိနေသော company များစွာအနက်မှ King Construction Group Co., Ltd.
နှင့် AME Accredited Oxford Academy (UK) တို့ဦးစီးဖွင့်လှစ်မည့် “Specialist Certificate in Decoration Technology and design Concept” Decoration & Design လုပ်ငန်းတွင် Professional ဖြစ်လိုသူများ အတွက် Singapore နိုင်ငံရှိဝါရင့် Decoration ပညာရှင်/ အင်
ဂျင်နီယာကြီးများမှ စာတွေ့လက်တွေ့သင်ကြားပေးမည် ဖြစ်ပြီး “AME Accredited Oxford Academy (UK)” မှချီးမြင့်သော အောက်ဖေါ်ပြပါ Decoration & Design ဆိုင်ရာပညာရပ်များကို သင်ကြားပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
(၁)Interior and exterior Decoration Technology
(၂)Interior and exterior design concept
(၃)Decoration Site Inspection
(၅)Suitability and proportion
(၇)Redesign and green design
(၈)Decoration Details Drawing stage
(၉)Universal design and ceiling decorations treatment
သင်တန်းကာလမှာ ၂လဖြစ်ပြီး တန်းခွဲတစ်ခုတွင် လူဦးရေ ၂၀ သာလက်ခံပေးသွား မည်ဖြစ်ပါသည်။ သင်တန်းအတွက် လိုအပ်သော သင်ထောက်ကူပစ္စည်းများနှင့်စာရွက်စာတန်းများအားသင်တန်းမှပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ သင်တန်းကာလအတွင်း ဘာသာရပ် တစ်ခုခြင်းဆီ အလိုက်ထူးချွန်မှု များကို Credit ပေးသွားမည်ဖြစ်ရာ သင်တန်းပြီးဆုံးသွားပါက ထူးချွန်ထက်မြတ်သောကျောင်းသူ/သားများအား King Construction Group Co.,Ltd. ၏ Decoration Department နေရာတွင်ခန့်အပ်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ တက်ရောက်လိုသူများအနေဖြင့်မကြာမှီဖွင့်လှစ်တော့မည့်တန်းခွဲသစ်များအတွက်စတင်စာရင်းပေးသွင်းနိုင်ပါပြီ။ Engineer မဟုတ်သော Decoration and design လုပ်ငန်းစိတ်ဝင်စားသူများလည်းတက်ရောက်နိုင်ပါသည်။ သင်တန်းကြေးမှာ 180000 ကျပ်ဖြစ်ပြီး ပထမဆုံး လာရောက်အပ်နှံသော သင်တန်းသား/သူ ၇ဦးအား ၁၀% Discount ပေးအပ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
U Aung Moe Hein